အလင်း (သို့ မဟုတ်) စကြာဝဠာ ၏ စေတမန်တော် | Curiosity Science Magazine
April 27, 2015 · by Thaw Zin Htun	· in Physical Science.	·
ခင်ဗျားပတ်ဝန်းကျင်ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါ။ ဘာတွေ မြင်ရသလဲ။ ခင်ဗျားပတ်လည်မှာ အရာဝတ္ထု တွေအများကြီး ။ အဲ့တာတွေအကုန်ခင်ဗျားဘာလို့ မြင်ရလဲ။ အလင်းရှိလို့ ပေါ့ ၊ မဟုတ်ဘူးလား။ အလင်းနဲ့ ကျွန်တော်တို့ အကုန်ရင်းနှီးပါတယ် ။ ငယ်ငယ်ကထဲက အလင်းပြန်ခြင်း ၊ အလင်းယိုင်ခြင်း အစရှိတာတွေဟာ အပ်ကြောင်းထပ်လောက်အောင် သင်နေရတဲ့အကြောင်းတွေပါ ။ ဒါပေမဲ့အလင်းဟာ ဒီလောက်ပဲလား ? ကျွန်တော်တို့ အတွက် ပတ်ဝန်းကျင် ကို မြင်ရလောက်အောင်တစ်ခုပဲ လား? ။ ဒီဆောင်ပါးလေးမှာ ကျွန်တော်နဲ့ အတူ အလင်း ရဲ လျှို့ ဝှက်ချက်တွေ ၊ စကြာဝဠာ အလင်းနှစ် သန်းပေါင်းများစွာ အကွာ အဝေး က နေ မြှုပ်နှံသယ်ဆောင်လာတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေ အကြောင်း ၊ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာကောင်းတဲ့ အလင်းရဲ့သဘာဝ တွေကို ကြည့်ကြရအောင် ။
Radiant Energy လို့ ခေါ်တဲ့ ဖြာထွက်စွမ်းအင်တစ်မျိုးပါပဲ ။ အလင်းဟာ အမှုန်အနေနဲ့ ကော လှိုင်းအနေနဲ့ ပါ ဒွန်တွဲပြီးတည်ရှိပါတယ် ။ Electromagnetic Wave လို့ ခေါ် တဲ့ လျှပ်စစ်သံလိုက် လှိုင်းတစ်မျိုးပါ ။ အလင်းမှာ ရောင်စဉ်ခုနှစ်မျိုး ပါဝင်ကြောင်းကို နယူတန် (Sir Isaac Newton) က စတင်တွေ့ ရှိပြီးတော့ သူ က Spectrum( Latin ဘာသာစကားအရ ၀ိညာဉ် ) လို့နာမည်ပေးခဲ့ပါတယ် ။ V,I,B,G,Y,O,R (ခရမ်း ၊ နက်ပြာ ၊ အပြာ၊ အစိမ်း၊ အဝါ၊ လိမ္မော် နဲ့ အနီ ) လို့ ငယ်ငယ် က ကျက်ခဲ့ရတာလေး မှတ်မိသေးကြလား? အဲ့ဒီရောင်စဉ်ခုနှစ်မျိုးနဲ့ရောစပ်ထားတဲ့အလင်း ဟာ ကျွန်တော်တို့ မျက်စိနဲ့ မြင်နိုင်တဲ့ အလင်း (Visible Light) လို့ ခေါ် ပါတယ် ။ လှိုင်းအလျား (Wavelength) 400 nm နဲ့700 nm ( nano = 10-9) ကြားမှာ တည်ရှိပါတယ် ။ အလင်းဟာ ကြားခံနယ် မရှိပဲ ဖြတ်သန်းသွားလာနိုင်ပါတယ် ။ အလင်းရဲ့ အလျှင် ဟာ 3×108 m/s ( တစ်စက္ကန့် ကို မိုင်ပေါင်း ၁၈၆၀၀၀) သွားလာနိုင်ပြီး ယနေ့ အထိ အမြန်ဆုံး အရာတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ် ။ ( သဘောတရားလေးပြန်ရှင်းပြတာပါ ။ နဲနဲလေးသွေးပူလေ့ကျင့်ခန်းပေါ့ ။ )
ပုံ-၁ : အလင်းတန်းရဲ့ ရောင်စဉ်များနှင့် သူတို့ ၏ လှိုင်းအလျားများပြပုံ
Infrared(Infra=အောက်,red=အနီရောင်)ကို အနီအောက်ရောင်ခြည်လို့ လွယ်လွယ်ဘာသာပြန်လို့ ရပါတယ် ။ ဘာလို့ အနီအောက်လို့ ခေါ်တာပါလဲ ? ရှင်းရှင်းလေးပါ Electromagnetic Spectrum (ပုံ ၂ တွင်ရှု ) မှာ အလင်းရဲ့ အနီရောင် အပိုင်း ရဲ့ နောက်မှာ တည်ရှိတာကြောင့်ပါ။ ပုံမှန်မြင်ရတဲ့ အလင်းဖြူထက် လှိုင်းအလျားပို ရှည်ပါတယ် ပြီး ကြိမ်နှုန်း (Frequency) ပိုနိမ့်ပါတယ် ။ သူတို့ ရဲ့ လှိုင်းအလျားတွေဟာ အလင်းဖြူလှိုင်းအလျားရဲ့ အဆုံး 700 nm ( nano = 10-9) ကနေ ပြီးတော့ 1 mm ( milli = 10-3)ထိကို ရှည်နိုင်ပါတယ် ။ သူတို့ ကို Night Vision တို့၊ နက္ခတ္တဗေဒ ပညာရပ် (Astronomy) ၊ ရာသီဥတု ခန့် မှန်းခြင်း ၊အပူချိန်မြင့်မြင့်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုတာများပါတယ်။တခြားဆေးဘက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွေမှာလဲအရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ်။
Infrared တွေကို William Herschel ဆိုတဲ့ ဂျာမန်-ဗြိတိန် လူမျိုး သိပ္ပံပညာရှင် ကနေ 1800 ခုနှစ်မှာ စတင်တွေ့ ရှိခဲ့တာပါ ။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး သိပါတယ် ။ နေပူတဲ့နေ့ တွေဆို အပူချိန်က အတော်မြင့်ပါတယ် ။ အဲ့တာဘာကြောင့်လဲ ? နေကလာတဲ့အလင်းတန်းမှာ အပူဓာတ် (Heat) ပါလို့ ပေါ့။ ဒါဆို အလင်းတန်းတွေ က နေပြီး တော့ အပူ ကိုသယ်ဆောင်ပေးတာပေါ့ ။ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ အတွက်တော့ ဒီလောက်နဲ့ တင်ကျေနပ်စရာပေါ့ ။ ဒါပေမဲ့ Herschel က ထပ်စဉ်းစားပါတယ်။ အလင်းမှာ ရောင်စဉ်ခုနစ်ခု ရှိတာကတော့ Newton ပြောလို့ သိခဲ့ရပြီ ။ အလင်းမှာ အပူဓာတ်ပါတာလဲ သိရပြီ ။ ဒါပေမဲ့ အလင်းရဲ့အရောင်စဉ်တွေထဲကမှာ ဘယ်တစ်ခုမှာ အပူဓာတ်အများဆုံးဖြစ်မလဲ ? အနီဟာ အပြာထက်များပိုပူမလား? အဲ့တာကိုသိဖို့ အတွက် သူ စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုကို ပြုလုပ်ပါတယ် ။ သူ့ ရဲ့ စမ်းသပ်ပုံ ဟာ ရိုးရိုးဆင်းဆင်း လေး ပါ ။ အရင်ဦးဆုံး သူ ဟာ လိုအပ်တဲ့ကိရိယာ တွေကို ပုံ-၃ ထဲက အတိုင်း ပြင်ဆင်ပါတယ် ။ အခန်းထဲကို ဝင်လာတဲ့အလင်းတန်းကိုသုံးမြှောင့်ဖန်တုံး က နေခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာ ရောင်စဉ်ခုနှစ်မျိုးဖြာထွက်သွားပါတယ် ။ဖြာထွက်တဲ့ ရောင်စဉ်တွေ အလိုက် သာမိုမီတာ ဆိုတဲ့ အပူချိန်တိုင်းကိရိယာ လေးတွေနဲ့လိုက်ချထားပါတယ် ။ ပြီးတော့ ရောင်စဉ်တွေရဲ့ အပြင် ( အနီရောင်အတန်းနဲ့ ကပ်လျက်လေးမှာ ) သူဟာ Control အဖြစ် အသုံးပြုဖို့သာမိုမီတာလေးတစ်ချောင်းကို သီးသန့်ထားပါတယ် ။ အဲ့ဒီ Control သာမိုမီတာလေး ကို နေရောင်လုံးဝ မထိရပါဘူး ။ ဒါမှအဲ့ဒီ Control သာမိုမီတာလေး နဲ့ယှဉ်ကြည့်လိုက်ပြီး တော့ ဘယ် ရောင်ခြည်တန်း ဟာ ပိုပြီး အပူချိန်မြင့်လဲဆိုတာ သိရမှာပေါ့ ။ ဒါနဲ့ သူဟာ Experiment လေးကို ဒီတိုင်းထားလိုက်ပါတယ် ။ ညနေခင်းကျတော့ သူ့ ရဲ့စမ်းသပ်ချက်လေး ကို ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ အနီရောင်ခြည်တန်းလေးနဲ့ထိထားတဲ့ သာမိုမီတာ ဟာ ပိုပြီး မြင့်နေတာကိုတွေ့ ရပါတယ် ။ ဟုတ်ပြီ ။အနီရောင်ခြည်တန်းက ပိုပြီး ပူတာပေါ့ ။ အင်းး Herschel ရဲ့စမ်းသပ်ချက်အောင်မြင်ပါပြီ ။ ဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာ သူဟာ သူ့ ရဲ့Control သာမိုမီတာလေး ကို ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ ပါးစပ်အဟောင်းသား ဖြစ်သွားရပါတော့တယ် ။ ဘာလို့ လဲဆိုတော့ Control မှာ အပူချိန်ဟာ သိသိသာသာ ကို မြင့်တက်နေလို့ ပါ ။ Herschel ခေါင်းခြောက်သွားပါတယ် ။ ဘာလဲဟ ပေါ့ ။ နေရောင်မထိ ပဲ ထားတဲ့ ကောင် က ဘာလို့ များပိုပြီး အပူချိန် သိသိ သာသာ ကြီး မြင့်တက်သွားတာလဲပေါ့ ။ အဲ့အချိန်မှာပဲ သူသိလိုက်ပါပြီ ။ သူဟာ အလင်းအသစ်တစ်မျိုး ကို ရှာဖွေတွေ့ ရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ် ။သူဟာ အလင်းရဲ့ အနီရောင် အဆုံးလေးနားမှာ ရှိနေတဲ့ Infrared လို့ ခေါ်တဲ့ အနီအောက်ရောင်ခြည်လှိုင်း ကို ပထမဆုံး တွေ့ ရှိခဲ့တဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ် ။ အဲ့ဒီ Infrared လှိုင်း ကို ကျွန်တော်တို့ ရဲ့သာမန် မျက်စိနဲ့ မမြင်နိုင်ပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က တော့ အပူဓာတ်အဖြစ်နဲ့ သိရှိနိုင်ပါတယ် ။ ဒါဟာ Revolutionary လို့ ခေါ်လို့ ရတဲ့ ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ တွေ့ ရှိမှုကြီးတစ်ခုလို့ ပြောလို့ ရပါတယ် ။
ပုံ-၂ : Electromagnetic Spectrum ပြပုံ
ပုံ – ၃ : Herschel ၏ စမ်းသပ်ချက် သရုပ်ဖော် ပြပုံ
Ultraviolet (Ultra= အထက် , Violet = ခရမ်း) ကို တော့ရင်းနှီးကြမှာပါ ။ ကြော်ငြာတွေ ၊ မိုးလေဝသ သတင်းတွေမှာ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် ဆိုပြီး ခနခန ကြားဖူးမှာပေါ့ ။ Electromagnetic Spectrum (ပုံ-၂ တွင်ရှု) မှာ ခရမ်းရောင် အလင်းတန်း ရဲ့ နောက်ကပ်လျက်မှာ ရှိတာ Ultraviolet Ray ပါ ။ လှိုင်းအလျား 400nm ကနေ 10 nm က နေရှိပါတယ် ။ ပုံမှန်မြင်ရတဲ့ အလင်းဖြူ ထက် လှိုင်းအလျားတိုပြီး တော့ ကြိမ်နှုန်း ပိုမြင့်ပါတယ် ။ သူ့ ကို ဓာတ်ပုံပညာရှင်တွေ ၊ လျှပ်စစ် ဓာတ်အားပေး စက်ရုံကြီးတွေ ၊ မှုခင်းဆရာဝန် တို့ တွေ သုံးတာများပါတယ် ။
သူ့ ကို ရှာဖွေ တွေ့ ရှိခဲ့တာကတော့ ၁၈၀၁ ခုနှစ်မှာ ဖြစ်ပြီး Johan Ritter ဆိုတဲ့ ဂျာမန်လူမျိုး ရူပဗေဒ ပညာရှင် ပဲဖြစ်ပါတယ် ။ Herschel ရဲ့ အနီအောက်ရောင်ခြည် ရှာဖွေမှု ကို ကြားသိပြီးတဲ့အခါမှာတော့ Ritter ဟာလဲ ခရမ်းရောင်အစွန်းဘက်မှာ ကော အဲ့လိုများ အလင်းတစ်မျိုးရှိမလားဆိုတဲ့ စူးစမ်းလေ့လာမှု နဲ့ အတူ သူ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကို စတင်ရှာဖွေဖို့ ပြုလုပ်ပါတော့တယ် ။
သူ့ ရဲ့စမ်းသပ်ချက်ဟာ လဲ Herschel ရဲ့စမ်းသပ်ချက်လိုပါပဲ ။ သူဟာ ပထမဦးဆုံး သာမိုမီတာတွေ(ပုံ-၃ ကိုပြန်ရှု) နေရာမှာ Silver Chloride (အလင်းနဲ့ တိထွေ့ တဲ့အခါမှာ အမဲရောင်ပြောင်းတတ်သော ဓာတုပစ္စည်းတစ်မျိုး) တွေကို တစ်တုံးချင်းလိုက်ပြီး ချပါတယ် ။ အချိန်ခနလောက်ထားပြီးတဲ့အခါမှာ သူ တွေ့ ရှိလိုက်တာကတော့ အနီရောင် အလင်းတန်း နဲ့ ထိတွေ့ နေတဲ့ Silver Chloride ဟာ နဲနဲလေး အမဲရောင်ပြောင်းနေပြီး ခရမ်းရောင်အလင်း တန်းဘက်က ဟာ ကတော့ တော်တော် ကြီး ကို အမဲရောင် ပြောင်းနေတာတွေ့ လိုက်ရပါတယ် ။ အင်းး ဟုတ်ပြီပေါ့ ။ ခရမ်းရောင်အလင်းကတော့ Silver Chloride နဲ့ဓာတ်ပြုတာ ပိုမို မြန်ဆန်တယ်ဆိုတာ သိရပြီ ။ အဲ့အချိန်မှာပဲ သူ ဟာ ခရမ်းရောင်ရဲ့ အစွန်းလးတစ်ဖက်မှာ Silver Chloride လေးနောက်တစ်တုံး ချထားလိုက်ပါတယ် ။ (Herschel ရဲ့စမ်းသပ်ချက်မှာ Control အဖြစ်သုံးတဲ့ သာမိုမီတာလေးနေရာမှာပေါ့ ) ။ အချိန်ခနလောက်စောင့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့ သူတွေ့ ရှိလိုက်ပါပြီ ။ ခရမ်းအလင်းတန်းအလွန်လေးဘက်မှာ ရှိနေတဲ့ Silver Chloride တုံးလေးဟာ ခရမ်းရောက်အလင်း အောက်မှာရှိနေတဲ့ Silver Chloride တုံးလေးထက်တောင်မှ ပိုပြီး အမဲရောင်ပြောင်းတာ ပိုပြီး မြန်ဆန် များပြား နေတာကို တွေ့ လိုက်ရပါတော့တယ် ။ Ritter ဟာ အစမှာ သူ တွေ့ ရှိခဲ့တဲ့ မမြင်ရတဲ့အလင်းတန်းကို ဓာတုရောင်ခြည် ( Chemical Rays ) လို့ နာမည်ပေးခဲ့ပါတယ် ။ နောက်မှာတော့ ခရမ်းရောင်အလင်းတန်း ရဲ့အလွန်လေးမှာ ရှိတဲ့ ရောင်ခြည်ဖြစ်တာကြောင့် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်လို့ ခေါ်ကြပါတော့တယ်။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကို သာမန်လူသားတွေ မမြင်တွေ့ ရပေမဲ့ ပိုးကောင်မွှားကောင်လေးတွေ ဟာ မြင်တွေ့ နိုင်ပါတယ် ။ အခြေအနေတစ်ချို့ မှာတော့ ကလေးတွေနဲ့ လူငယ်တွေဟာ 310 nm လှိုင်းအလျားထက်မလျော့တဲ့ UV (ultraviolet) အလင်းတန်းတွေ ကို တွေ့ မြင်နိုင်ပါတယ် ။ ကဲ .. Infrared နဲ့Ultraviolet ရဲ့ အကြောင်းတွေ ဒီလောက်ဆိုရင် အကြမ်းဖျင်းတော့ သဘောပေါက်လောက်ပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ အလင်းရဲ့ လျှို့ ဝှက်ချက်တွေ ဟာကျန်နေပါသေးတဲ့ ။ လင်းလက်လှပနေတဲ့ ရောင်စဉ်ခုနစ်တန်း ထဲမှာ စကြာဝဠာကြီး က နေ ကျွန်တော်တို့ ကို ပေးထားတဲ့ လျှို့ဝှက်ကုဒ် တွေ ဟာ ရှိနေပါသေးတယ် ။ ဆက်ကြည့်ရအောင် ။
ကဲ … မျက်လုံးလေးခနမှိတ်ကြည့်လိုက် ။ စိတ်ထဲမှာ ပန်းမျိုးစုံနဲ့ လှပနေတဲ့ ဥယျာဉ်ကြီး တစ်ခုထဲမှာ ခင်ဗျား ရောက်နေတယ်လို့ မြင်ကြည့်လိုက် ။ အပြာရောင်ပန်းလေးတွေ ၊ အဝါရောင်ပန်းလေးတွေ ၊ အနီရောင်ပန်းလေးတွေ ရောင်စုံတွေဗျာ ။ မလှဘူးလား? ကဲ .. တစ်ခုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရအောင် ။ ဘာလို့ ဒီပန်းပွင့်ချပ်လေးတွေဟာ နီနေတာလဲ ? ပြာနေတာလဲ ? ဘာလို့ လဲ ? နဲနဲလေးခေါင်းစားကြည့်လိုက်ရအောင် ။ ကဲ .. စိတ်ကူးထဲမှာ ခင်ဗျား အပြာရောင်ပန်းပွင့်လေးတစ်ပွင့်ကိုလှမ်းယူလိုက် ။ ပွင့်ဖတ် ပြာပြာလေးတွေနဲ့။ ကျွန်တော်တို့ ဟာ အလင်းစွမ်းအင် အရင်းအမြစ် ကို နေ က ရရှိပါတယ် ။ နေ က အဖြူရောင်အလင်းတန်းတွေ ဟာ ခင်ဗျားရဲ့ လက်ထဲက ပွင့်ဖတ် အပြာရောင်လေး ကို လာပြီး ရိုက်ခတ်ပါတယ် ။ ဒီပန်းပွင့်လေးဟာ ပြာနေတယ် ဆိုတာ နေကလာတဲ့ ရောင်စဉ်ခုနှစ်ဖြာထဲကနေ အနီရောင် အလင်း ( လှိုင်းအလျားရှည် ၊ စွမ်းအင်နည်း ) ကို စုပ်ယူပြီး အပြာရောင် အလင်းတန်း (လှိုင်းအလျားတို ၊ စွမ်းအင်များ) ကို အလင်းပြန်လို့ ပါ ။ ဘယ် အလင်းလှိုင်းကို စုပ်ယူပြီး ဘယ်အလင်းလှိုင်းကို ပြန်တယ်ဆိုတာဟာ ပစ္စည်းရဲ့ ဂုဏ်သတ္တိ အပေါ် မူတည်ပါတယ် ။ ဥပမာ ငှက်ပျောသီးမှည့် တစ်လုံးမှာ ဆို ရင် သူ ဟာ အလင်းလှိုင်း 570 nm ကနေ ပြီး 580 nm အထိကို အလင်းပြန်ပါတယ် ။ ဒီ အလင်းလှိုင်း ရဲ့ အရှည်ကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် အဝါရောင်အလင်းလှိုင်းရဲ့ အရှည်ဖြစ်နေတာတွေ့ ရပါလိမ့်မယ် ။ ဒါကြောင့် ငှက်ပျောသီးမှည့် တစ်လုံး ကို အဝါရောင်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ် ။ တကယ် တော့ ကျွန်တော်တို့ မြင်နေရတဲ့ အရောင်ဆိုတာ ဟာ ကျွန်တော်တို့ မျက်လုံး က နေပြီးတော့ အလင်းတန်းတွေ ရဲ့ စွမ်းအင်ပုံစံတွေ ကို ခွဲခြားမြင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် ။ နေထွက်ချိန် ၊ နေဝင်ချိန် ၊ သဘာဝအလှအပတွေ ၊ ခင်ဗျားချစ်သူရဲ့ နှုတ်ခမ်းနီနီ လေး ၊ အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးဟာ အလင်းတန်းတစ်ခုထဲမှာပါဝင်တဲ့ ရောင်စဉ်တွေရဲ့ လှိုင်းအလျား ၊ ကြိမ်နှုန်းနဲ့ စွမ်းအင် မတူညီမှုတွေ က နေပြီး ခင်ဗျားရဲ့ အမြင်အာရုံ ကို လှုံ့ ဆော်တဲ့ ဖြစ်စဉ် တစ်ခုကနေဖြစ်ပေါ်လာရတာဖြစ်ပါတယ် ။ အနီရောင် အလင်းတန်း ဟာ လှိုင်းအလျားအရှည်ဆုံးနဲ့စွမ်းအင်အနိမ့်ဆုံးဖြစ်ပြီးခရမ်းရောင်အလင်းတန်းကတော့လှိုင်းအလျားအတိုဆုံးနဲ့ စွမ်းအင်အများဆုံးဖြစ်ပါတယ် ။
Joseph von Fraunhofer လို့ ခေါ်တဲ့ ဂျာမန် လူမျိုး အလင်းဘက်ဆိုင်ရာ ပညာရှင် ကို မတ်လ ခြောက်ရက်နေ့ ၊ ၁၇၈၇ ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ် ။ ၁၁ နှစ်အရွယ်ကထဲက မိဘမဲ့လေးတစ်ယောက် အဖြစ် နေခဲ့ရပြီး ခက်ထန်ကြမ်းတမ်းတဲ့ ဖန်ချက်အလုပ်ရုံပိုင်ရှင်တစ်ယောက်ရဲ့ လက်အောက်မှာ ဆင်းဆင်းရဲရဲအလုပ်လုပ်ခဲ့ရပါပြီး ကျောင်းလဲမနေခဲ့ရပါဘူး။ ဒီကြားထဲမှာ ရရင်ရသလို စာအုပ်တွေကို ဖတ်ပါတယ် ။ တစ်နေ့ မှာ သူ့ အလုပ်ရှင်ရဲ့ အလုပ်ရုံပြိုကျရာ မှာ Bavaria နိုင်ငံရဲ့အိမ်ရှေ့စံမင်းသား Maximilian IV Joseph ကနေပြီးတော့ လာရောက်ကြည့်ရှု ရာက နေ Fraunhoferလေး ရဲ့ ဉာဏ်ပညာ ကိုသဘောကျသွားပြီး စာသင် ဖို့ ငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့ပါတယ် ။ အဲ့ဒီကနေ ပြီးတော့ ၁၈၀၆ ခုနှစ်မှာတော့ Utzscheider နဲ့ Reichenbach (သိပ္ပံပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သူ) တို့ ဟာ Fraunhofer ကို သူတို့ ရဲ့နိုင်ငံတော် ပိုင် အလင်းနဲ့ သက်ဆိုင်သော ပစ္စည်းများ (telescope အစရှိသည်) တို့ လို့ ထုတ်လုပ်တဲ့ နေရာမှာ ခေါ်ထားခဲ့ပါတယ် ။ အဲ့ဒီခေတ်တုန်းက တော့ အဲ့နေရာဟာ လုံးဝ နောက်ဆုံးပေါ် နိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ လျှို့ ဝှက်နည်းပညာ ပစ္စည်းစက်ရုံပေါ့။
အဲ့ဒီမှာနေရင်း ၁၈၁၄ ခုနှစ်ရဲ့နေ့ တစ်နေ့ မှာ သူ ဟာ ဘယ်ဖန်အမျိုးအစား ဟာ ပိုမိုကောင်းမွန်တိကျတဲ့ မှန်ဘီလူး အဖြစ်သုံးလို့ ရမလဲ ဆိုတာ ကို စမ်းသပ်နေပါတယ် ။ သုံးမြှောင့်ဖန်တုံးတွေ တစ်တုံးပြီးတစ်တုံး နဲ့ အလင်းဖြူကို ရောင်စဉ်တွေခွဲဖြာ ကြည့်ရင်း က နေ သူ စိတ်ကူးတစ်ခုဝင်လာပါတယ် ။ အဲ့တာနဲ့ ပဲ သူ ဟာ သုံးမြှောင့်ဖန်တုံး ကို ဖြတ်လာတဲ့ ရောင်စဉ်ခုနှစ်ခုကို Theodolite (ပုံ-၄ ရှု) လို့ ခေါ်တဲ့ telescope တစ်ခုမျိုးနဲ့(theodolite ကို ပြင်ညီမျက်နှာပြင်တွေမှာ တိကျတဲ့ထောင့်ကို တိုင်းတာအဲ့အခါမှာသုံးတာများပါတယ်။) နဲ့ ကြည့်ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာ အရမ်းကို အံ့သြသွားရပါတော့တယ် ။ ဘာလို့ လဲဆိုတော့ သူ ဟာ ခုနှစ်ခုသော ရောင်စဉ်တန်း တွေကြားထဲမှာ မဲမဲ အစဉ်းကြောင်းလေးတွေကို တွေ့ လိုက်ရလို့ ပါ ။ (ပုံ-၅ )
ပုံ-၄ : Theodolite
ပုံ-၅ : Fraunhofer Line များပြပုံ
အမဲအစင်းကြောင်းလေးတွေ၊ အလင်းထဲမှာ ပါရှိနေတဲ့ အမဲရောင်လိုင်းလေးတွေ ။ ခင်ဗျားကတော့မေးစရာရှိပါလိမ့်မယ် ။ ဒါတွေဘာတွေမို့ အဲ့လောက်အရေးတယူပြောနေရတာလဲပေါ့။ တကယ်တော့အဲ့ဒီအမဲကြောင်းလေးတွေဟာ အလင်းထဲမှာ မြှုပ်နှံထားတဲ့ လျှို့ ဝှက် သင်္ကေတတွေ ပါ ။ စကြာဝဠာကြီးကနေ ကျွန်တော်တို့ ဆီ ပို့ လွှတ်လိုက်တဲ့ လျှို့ ဝှက်ချက်တွေပေါ့ ။ ဒီ Fraunhofer Line တွေရဲ့ ရှာဖွေတွေ့ ရှိမှုကို သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ ရူပဗေဒ(Physics) နဲ့ နက္ခတ္တဗေဒ (Astronomy) တို့ရဲ့လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းလို့ တောင်တင်စားခေါ်ဝေါ် ကြပါတယ် ။ ဘာလို့ လဲဆိုတော့ အဲ့အမဲလိုင်းလေးတွေကနေပြီးတော့ Astrophysics လို့ခေါ်တဲ့ စကြာဝဠာ ရဲ့ သဘာဝ ကို ဦးစားပေးလေ့လာတဲ့ ဘာသာရပ်အသစ်တစ်ခု ထွက်ပေါ်လာစေခဲ့လို့ ပါပဲ ။
ဟုတ်ပါပြီ ။ ဘာတွေကများ ဒီအမဲရောင်လိုင်းလေးတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေတာပါတဲ့လဲ ? ကဲ လုံးဝအရေးကြီး ပြီး စိတ်ဝင်စားဖို့ အကောင်းဆုံး အပိုင်းကတော့ ရောက်ရှိလာပါပြီ ။ သေချာလေး ကျွန်တော်နဲ့ အတူတူကြည့်ကြတာပေါ့ ။ အကြမ်းဖျင်းပြောရမယ်ဆို ရင်တော့ အဲ့ဒီအမဲရောင်လိုင်းလေးတွေ ဟာ သူတို့ ရဲ့ သက်ဆိုင် ရာ အလင်းရောင်စဉ်တန်းတွေ ရဲ့ လှိုင်းတွေ ကို အက်တမ် တွေ က နေ စုပ်ယူတာကိုခံရတဲအခါမှာ ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ် ။ ကဲ အရှင်းလင်းဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် ဟိုက်ဒရိုဂျင် အက်တမ် နဲ့ ဥပမာ ပေးပါ့မယ် ။ ဟိုက်ဒရိုဂျင် ဟာ စကြာဝဠာတစ်ခုလုံးမှာ အရိုးရှင်းဆုံး အက်တမ်တစ်ခုပါ ။ သူ့ မှာ အီလက်ထရွန် တစ်လုံးနဲ့ပရိုတွန် တစ်လုံး ဆီပဲ ပါ ပါတယ် ။ အက်တမ် တစ်လုံးမှာ အီလက်ထရွန်တွေ ဟာ နျူးကလီးယပ်စ် ကို ပတ်ပြီး လှည့်ပတ်ပါတယ် ။ အဲ့လိုပတ်တဲ့အခါမှာ အီလက်ထရွန် ဟာ သူ့ ရဲ့ သတ်မှတ်ထားရာလမ်းကြောင်း (orbit) မှာ လှိုင်းပုံသဏ္ဍာန် ဝေ့ဝိုက်ပြီး လှည့်ပတ်ပါတယ် ။ Orbital ဆိုတာ ဟာ အဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ အီလက်ထရွန်ကို တွေ့ နိုင်ခြေ ကိုတွက်ထုတ် တဲ့ သင်္ချာဆိုင်ရာ အစုအဝေးတွေပါ ။ (၁ဝတန်းစာကိုပြန်မှတ်မိဦးမယ်ဆိုရင် Atomic Structure တွေကို s,p,d,f တွေနဲ့ ရေးရတာမှတ်မိဦးမှာပါ ။ ) အီလက်ထရွန် ရဲ့လမ်းကြောင်းကြီးကို ဓာတ်လှေခါးတစ်ခုရဲ့ သွားရာလမ်းကိုမြင်ကြည့်ပါ ။ အထပ်တစ်ထပ်ဆီဟာ Orbital တစ်ခု ၊ အီလက်ထရွန် တွေ ဟာ ဓာတ်လှေခါးစီးပြီးသွားလာနေကြတယ်လို့ မှတ်လိုက်ပါ ။ ဓာတ်လှေခါးဟာ အထပ်နှစ်ခု ရဲ့ အလည်မှာ မရပ်ပါဘူး ။ အထပ်တစ်ခုဆီမှာပဲ ရပ်ပါတယ် ။ ပထမ ထပ်မှာလဲရပ်နိုင်ပတယ် ။ ဒုတိယထပ်မှာလဲ ရပ်နိုင်ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့နှစ်ထပ်ကြားမှာ ကိုးလိုးကန့် လန့် ကြီးတေ့ မရပ်နိုင်ပါဘူး ။ ထို့ အတူပဲ အီလက်ထရွန် တွေ ဟာလဲ Orbital တစ်ခု ဆီမှာ သာ တည်ရှိ နိုင်ပါတယ် ။ Orbital နှစ်ခုရဲ့ကြားမှာ ဘယ်တော့မှ ရှာမတွေ့ နိုင်ပါဘူး ။ Orbital ရဲ့ သဘောတရားကို ဒီလိုပဲအလွယ်မှတ်ထားပေးပါ ။ သူ့ ကို အကျယ်ဖြန့် ရှင်းမယ် ဆိုရင် ဒီဆောင်းပါးထက်နှစ်ဆလောက်ရှည်တဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ခု နဲ့ရှင်းမှရမှာဖြစ်လို့ ပါ ။ ကဲ .. ဆက်မယ်နော် ။ အီလက်ထရွန် တွေ ရဲ့လမ်းကြောင်းအရွယ်အစား ဟာ အက်တမ်တစ်မျိုးနဲ့ တစ်မျိုးမှာ မတူညီပါဘူး ။ ဒါဟာ ဒြပ်စင်တွေ ဟာ တစ်မျိုးနဲ့ တစ်မျိုး ကွာ ခြားနေတာ ရဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။ အီလက်ထရွန်တွေ ဟာ နျူးကလိယပ်စ် ကို ဗဟိုမှတ်ထားပြီး လည်ပတ်ရင်းကနေ လမ်းကြောင်း တစ်ခု ကနေ တစ်ခု ကို ခုန်ကူး ပါတယ် ။ အဲ့လို ခုန်ကူးတာကို Atomic Electron Transition (ပုံ-၆ ကိုရှု) လို့ ခေါ်ပါတယ် ။ ပိုကြီးတဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားရင် အီလက်ထရွန် ရဲ့Energy ဟာ ပိုမြင့်တက်သွားပါတယ် ။ အီလက်ထရွန် တစ်ခုဟာ သေးငယ်တဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ်က နေ ကြီးမားတဲ့ လမ်းကြောင်းအပေါ် ခုန်တက်မယ်ဆိုရင် စွမ်းအင် ကို စုပ်ယူရပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ကြီးမားတဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ် ကနေ သေးငယ်တဲ့လမ်းကြောင်းအပေါ်ခုန်ဆင်းမယ်ဆိုရင်တော့ စွမ်းအင်ကို ထုတ်လွှတ်ရပါတယ် ။ ခုန်တက် ပြီဆိုရင် စွမ်းအင်ကို စုပ်ယူ ရတဲ့အတွက် အက်တမ် ဟာ သူလိုအပ်တဲ့စွမ်းအင် ကို အလင်းတန်းဆီ က နေ စုပ်ယူပါတယ် ။ ခုန်ဆင်းပြီ ဆိုရင်ဖြင့် အက်တမ် ဟာ အလင်းတန်း ကို ထုတ်လွှတ်ပါတယ် ။ ဘယ်လောက်လှိုင်းအလျားနဲ့ ရောင်စဉ် အလင်းတန်း (အနီ၊ အပြာ ၊အဝါ အစရှိသရွေ့ ) ကိုထုတ်ရသလဲဆိုရင် လမ်းကြောင်းနှစ်ခု ကြား က စွမ်းအင် ခြားနားခြင်း နဲ့ တူညီတဲ့ စွမ်းအင်ရှိတဲ့ လှိုင်းအလျား ကို ထုတ်လွှတ်ရပါတယ် ။ စွမ်းအင်ခြားနားခြင်း ကြီးမားလို့ ရှိရင် လှိုင်းအလျားတို ပြီး စွမ်းအင်မြင့်တဲ့ အလင်းတန်း (ဥပမာ ခရမ်းရောင်အလင်းတန်း) ကို ထုတ်လွှတ်ရပါတယ် ။ အဲ့ဒီ ထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့ အလင်းလှိုင်းတွေ ဟာ ပြန့်ကျဲသွားပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ ဆီ ကိုရောက်မလာတော့ပါဘူး ။ ဒါကြောင့် အဲ့ဒီ နေရာလေးတွေမှာ အမဲရောင် ကွက်လပ် ကလေးတွေဖြစ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်(ပုံ-၇ ရှု) ။ ပြောရမယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီ အမဲရောင်လိုင်းတွေ ဟာ အက်တမ်တွေ ရဲ့အရိပ်တွေ ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဟိုက်ဒရိုဂျင် အက်တမ် ရဲ့ အရိပ်ဟာ ပုံစံတစ်မျိုး ဖြစ်မယ်ဆို ၊ အဲ့ ဆိုဒီယမ် အက်တမ် ရဲ့ အရိပ်ဟာပုံစံ တစ်မျိုးဖြစ်မယ် ၊ ကလိုရင်း အက်တမ် ရဲ့ အရိပ်ဟာ ပုံစံ တစ်မျိုးဖြစ်မယ် ။ (အက်တမ် အသီးသီး ဆီရဲ့Atomic Electron Transition အတိုင်း အရိပ်တွေ ဟာ ကွဲပြားသွားမယ် ။ ) အဲ့ဒီလိုဆိုရင် အရမ်းရှင်းလင်းသွားပါပြီ ။ ဒီ ရောင်စဉ်တန်းထဲမှာ အရိပ် ကို ကြည့်ပြီး ကျွန်တော်တို့ဟာ အဲ့ အလင်းရဲ့ဇစ်မြစ်မှာ ဘာအက်တမ်တွေနဲ့ဖွဲ့ စည်းထားမလဲ ဆိုတာ ကို သိနိုင်ပြီပေါ့ ။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ လိုင်းတွေကို A band, B band အစရှိသရွေ့ နာမည်များနဲ့ လှိုင်းအလျားများ အလိုက် Spectrum မှာ ဖော်ပြ ကာ ဘယ်လိုင်းဆိုရင် ဘယ် ဒြပ်စင် ကြောင့်ဖြစ်တာ ဟုဆိုတာ တန်းသိရှိနိုင်ပေသည်။ အဲ့ ဒီ Fraunhofer Lines တွေ က နေပြီတော့ ကျွန်တော်တို့ ဟာ ဘယ်ကြယ်မှာတော့ဖြင့် ဘယ်အက်တမ် က ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်တယ် ဆိုတာ သိရှိနိုင် ပါတယ် ။ ဝေးကွာလှတဲ့ စကြာဝဠာ ဟိုးဘက် တစ်နေရာ က ကြယ်တွေ ကနေ ကျွန်တော်တို့ ဆီကို အလင်း ဆိုတဲ့ စေတမန် ကနေ တစ်ဆင့် ပို့ ပေးလိုက်တဲ့လျှို့ ဝှက်သင်္ကေတ တွေပေါ့ ။
ပုံ-၆ Atomic Electron Transition ပုံ-၇ Hydrogen Atom မှ ဖြစ်ပေါ်စေသော အရိပ်
ပုံ-၈ : Fraunhofer’s Spectrum ပြပုံ
Fraunhofer Lines တွေရဲ့ တွေ့ ရှိမှုဟာ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၆၀၀ ကျော် သိပ္ပံခရီးမှာ အင်မတန်အရေးပါတဲ့ တွေ့ ရှိချက်တစ်မျိုးပါပဲ ။ အလင်းနှစ် ပေါင်းမြောက်များစွာကွာဝေးတဲ့ ကြယ်တွေ ကို Fraunhofer ဟာ ကျွန်တော်တို့ ရှေ့ကို ဆွဲခေါ်ပြခဲ့ပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ နေထိုင်ရာ စကြာဝဠာကြီး မှာ ရှိတဲ့ ဒြပ်စင်တွေ ဟာ ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာရှိတဲ့ ဒြပ်စင်တွေ ပဲဆိုတာကို သိရှိခဲ့ရတယ် ။ သိပ္ပံသူရဲကောင်း တစ်ယောက်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ရဲ့စကြာဝဠာ အပေါ် နားလည် မှု တွေ ပိုမိုတိုးတက်လာ ရ သလို တစ်ဖက် က လဲ မေးခွန်းများစွာထွက်ပေါ်လာတယ် ။ အလင်းထဲမှာ ပိုပြိး ထူးဆန်းတဲ့ လျှို့ ဝှက်ချက်တွေကော ရှိမနေနိုင်ဘူးလား? အလင်းထဲမှာ နောက်ထပ် ဘာတွေများရှိနေဦးမှာလဲ ? ကဲ မိတ်ဆွေ .. ခင်ဗျားလဲ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆို ရင် ရှာကြည့်လို့ရတယ် နော် ။ ရှိနေနိုင်ပါသေးတယ် ။ ခင်ဗျား ရှာမတွေ့ ဘူးလို့ ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ပါဘူး ။ Carl Sagan အမြဲ အပြောခဲ့သလိုပေါ့ဗျာ ။ “Somewhere, something incredible is waiting to be known”. တစ်နေနေရာမှာ ပြောင်မြောက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတွေ ဟာ ရှာဖွေတွေ့ ရှိဖို့ အတွက် စောင့်ဆိုင်း နေကြတယ် ဆိုတာပေါ့ ။ ကဲ ဆောင်းပါးလဲအတော်အတန်ရှည်သွားပြီမို့ ဒီမှာနိဂုံးချုပ်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ ။
MacFarlane, S., & Druyan, A. (2014, March 9). Cosmos: A Spacetime Odyssey [Documentry].
Hecht, E. (2002).Optics (4th ed.). Reading, Mass.: Addison-Wesley.
Saleh, B., & Teich, M. (1991).Fundamentals of photonics. New York: Wiley.
P.S. နက္ခတ္တဗေဒ (Astronomy) ဆိုသည်မှာ ဗေဒင်နက္ခတ် ကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ ။ ကောင်းကင်ပေါ်ရှိ ကြယ်တာရာများ ကိုလေ့လာသော သိပ္ပံဘာသာရပ် ဖြစ်ပါသည် ။ ဗေဒင် နက္ခတ် ပညာ သည် Astrology ဟုခေါ်ပါသည်။ ကွဲပြားချက် ကို သိရှိရန်ဖြစ်ပါ၏ ။
ခြားဈဒါဝငျ မညျသူနညျး →
One response to “အလင်း (သို့ မဟုတ်) စကြာဝဠာ ၏ စေတမန်တော်”
Aung Myint Myat July 21, 2016 at 4:03 pm · · Reply →
အရမ်းကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ ဒီ Post အတွက်
နောက်လဲ ဒီထက် မက အကောင်းဆုံးတွေ ကို ဆတ်လက် လုပ်နိုင်ပါစေ ဗျာ